धनी व्यापारीको पोल्टामा कृषि ऋणको अनुदान - Purwanchal Daily
कहलिएका व्यवसायी पवनकुमार गोल्यान एनएमबि ब्यांकका अध्यक्ष समेत हुन्। ब्यांक, बीमा, होटल, जलविद्युत्, उत्पादन उद्योग लगायतमा लगानी गरेका गोल्यानले पछिल्ला वर्ष कृषि व्यवसायमा हात हालेका छन्। उनको व्यावसायिक समूहले झापाको मदरगाछल, चकचके र घेराबारीमा तरकारी उत्पादन गर्छ र, त्यसका लागि उनलाई सरकारले राज्यकोषबाट अनुदान दिन्छ। वर्षेनि अर्बौंको कारोबार गर्ने र नाफाको व्यावसायिक साम्राज्य सिर्जना गरेका गोल्यानले इस्टर्न एग्रिकल्चर र बृहत् एग्रो फार्मका नाममा ब्यांकबाट लिएको कृषि कर्जामा सरकारले ब्याज अनुदान दिंदै आएको खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले गरेको खोजबिनले देखाएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) को वैशाखसम्मको १० महीनामा मात्र कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान बापत राज्यकोषको रू.३ अर्ब ७९ करोड ४३ लाख ९२ हजार खर्च भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस्तो रकम रू.३ अर्ब ५२ करोड ४८ लाख ६४ हजार थियो। आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि व्यवसाय सहित सहुलियतपूर्ण ऋणमा अनुदानका लागि रू.७ अर्ब ६० करोड बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले २०७३ चैतमा जारी गरेको सहुलियतपूर्ण कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमा रू.७ करोडसम्मको कृषि कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था थियो। यसलाई २०७५ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि जारी गर्‍यो। एकीकृत कार्यविधिमा रू.५ करोडसम्मको कृषि कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान र त्यसभन्दा माथि रू.१० करोडसम्म २ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरियो।
तथ्यांक अनुसार, कृषि क्षेत्रमा काम गर्न भनेर दर्ता गरिएका १ हजार ३५३ कम्पनी (एकै कम्पनीले एकभन्दा बढी पटक ऋण लिएको समेत गरी) ले रू.१ करोड भन्दा धेरै कृषि ऋण लिएका छन्। यी कम्पनीमध्ये अधिकांश स्थापित र ठूलो कारोबार गर्दै आएका कम्पनी हुन्। यस्ता कम्पनीले पाँच वर्षसम्म ब्याजमा अनुदान पाइरहने कार्यविधि तोकिएको छ।
गोल्यान समूहले सुरभी गोल्यानका नाममा २४ असोज २०७५ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा रू.१ करोड चुक्ता पूँजी भएको इस्टर्न एग्रिकल्चर फार्म प्रालि (कम्पनी दर्ता नम्बर २००८५४) र बृहत् एग्रो फार्म प्रालि (कम्पनी दर्ता नम्बर २००८१३) दर्ता गरेको थियो। यिनै कम्पनीको नाममा ब्यांकबाट लिइएकोे कर्जामा २०७५ मंसीरपछि सरकारले ब्याज अनुदान दिन थालेको हो। यी दुई कम्पनीले २०७७ पुस मसान्तसम्ममा रू.४० लाख ३९ हजार ३७८ ब्याज अनुदान पाएको अभिलेखमा उल्लेख छ।
गोल्यान समूहका पवनकुमार गोल्यान आफ्ना तीन वटा कम्पनी मार्फत करीब साढे १० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण लिएको बताउँछन्। उक्त ऋणको ब्याजमा वार्षिक करीब रू.५० लाख छुट पाइने र उक्त रकमले आफ्ना लागि खासै अर्थ नराख्ने उनको भनाइ छ। “यो रकम लिएर मलाई खास अर्थ छैन, हल्ला मात्रै हुन्छ भनेर अब छिट्टै ऋण चुक्ता गरिदिने विचार गरेको छु,” गोल्यान भन्छन्। सरकारी अनुदानको लाभ लिइरहेका उनी स्वयं पनि यो कार्यक्रमको लाभ वास्तविक र साना किसानले पाउन नसकेको स्वीकार गर्छन्। भन्छन्, “नीति बनाउनेले नै ठूला व्यवसायी होइन, साना किसानलाई लाभ पुग्ने गरी बनाउनुपर्‍यो।”
नेपालको ठूलोमध्येको एक व्यावसायिक घराना सौरभ समूहले जगदम्बा टी प्रोसेसिङ प्रालिका नाममा लिएको कृषि ऋणको ब्याजमा २०७७ कात्तिकदेखि सरकारबाट अनुदान लिन थालेको छ। तीन महीनामा मात्रै यो कम्पनीले रू.६ लाख ७५ हजार ३८३ अनुदान पाएको विवरणले देखाउँछ। छड, सिमेन्टको उत्पादन, ब्यांक, घरजग्गा आदि व्यवसायमा ठूलो लगानी भएको यो समूहले हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्छ। तर, यही समूहले किसानलक्षित ब्याज अनुदान पनि आफ्नो पोल्टामा पारेको छ। यो समूह ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकबाट नेपालमा धेरै रकम भित्र्याउने समूहमध्येको एक रहेको खोज पत्रकारिता केन्द्रले खुलासा गरेको थियो।
अर्को व्यावसायिक घराना त्रिवेणी समूहले पनि नेपाल चिया विकास कम्पनी लिमिटेडको नाममा लिएको कृषि ऋणमा रू.६ लाख ६५ हजार ९७० ब्याज अनुदान लिइसकेको छ। यो कम्पनीका सञ्चालक रामचन्द्र सांघाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हुन्। सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल चिया विकास निगम निजीकरण गरिएपछि त्रिवेणी समूहले ५० वर्ष उपयोग गर्ने गरी २०५७ सालमा सम्झौता गरिएको थियो। तर, त्रिवेणी समूहको स्वामित्वको निगमले सरकारलाई २०५७ देखि २०६२/६३ सम्मको भाडा बापत बुझाउनुपर्ने रू. १० करोड ७३ लाख नतिरेको महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
देशकै पुरानो व्यापारिक घरानामा नाम आउँछ, केडिया अर्गनाइजेसनको। दर्जनौं उद्योग व्यवसाय चलाइरहेको यो अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको सीताराम गोकुल मिल्स प्रालि पनि सरकारबाट ब्याज अनुदान पाउने सूचीमा छ। सीताराम गोकुल मिल्सलाई केडिया परिवारका सुमित केडिया सहितले सञ्चालन गर्छन्। मिल्सले लिएको ऋणमा सरकारबाट गत पुससम्म रू.१ लाख ६१ हजार ८४२ अनुदान पाएको छ। त्यसयता कति अनुदान लियो भन्ने तथ्यांक उपलब्ध छैन। ठूलो व्यावसायिक घराना बतास समूह अन्तर्गतको बतास एग्रो प्रालि पनि गत माघमा सरकारी ब्याज अनुदान पाउने सूचीमा चढिसकेको छ।
झापाका व्यवसायी गोविन्दराम सरियाको आयात निर्यात सहित बहु–व्यवसायमा लगानी छ। उनैको कम्पनी मोडर्न टी इन्डस्ट्रिजले रू.४६ लाख ४१ हजार ब्याज अनुदान हत्याएको छ। सरिया नेपालमा सुपारीको आयात निर्यात कारोबारका ठूला व्यवसायी हुन्। गत वैशाखमा सरियाको कम्पनीलाई वाणिज्य विभागले कोटा प्रणाली तोक्दै सुपारी आयातको जिम्मा सुम्पिएको थियो।
झापाका अर्का ठूला व्यवसायी प्रदीप मित्तलको वैभव टी स्टेटले रू.५ लाख ७३ हजार र झापाकै ओमप्रकाश अग्रवालको तिरुपति टी इन्डस्ट्रिजले रू.४ लाख ७ हजार ब्याज अनुदान लिएका छन्। अग्रवालको सिमेन्ट उद्योग सहितका कैयौं व्यवसायमा लगानी छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकालको झापा टी स्टेट प्रालि पनि ब्याज अनुदान पाउने सूचीमा छ।
नेपालमा कुखुरा सम्बन्धी व्यवसायको सबैभन्दा ठूलो कारोबारी समूहमा पर्छ, भ्याली ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज। कुखुराको मासु दैनिक १० हजार किलोभन्दा धेरै बेच्ने यो समूह अन्तर्गत चार ह्याचरी, तीन दाना उद्योग सहित रेस्टुरेन्ट, औषधि उद्योग र सवारी साधन आयात गरी बिक्री गर्ने कम्पनी समेत छन्। चार दशक पुरानो यो व्यावसायिक समूह अन्तर्गतका चार कम्पनीले पनि सरकारबाट कम्तीमा रू.३१ लाख अनुदान लिइसकेका छन्। यो समूह अन्तर्गत भ्याली पेलेट फिड र भ्याली पोल्ट्री प्रालिले २०७७ साउनदेखि पुससम्ममा सरकारबाट रू.९ लाख ४७ हजार ७७६ ब्याज अनुदान लिएका छन्। कुल रू.१५ लाख ५१ हजार अनुदान पाइसकेका मेची पोल्ट्री प्रालि र त्रिशूली ब्रिडिङ एन्ड रिसर्च सेन्टर पनि यही समूह अन्तर्गतका हुन्।
सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटीले देशका विभिन्न शहरमा चार तारेसहित पाँच होटल, लक्जरी रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल एजेन्सी आदि सञ्चालन गर्छ। यसका सञ्चालक ध्रुव न्यौपानेले वेस्टर्न बिजनेस ग्रुपका सञ्चालक दुर्गाप्रसाद भण्डारी लगायतसँग मिलेर पैंचो पसल नामक कम्पनी स्थापना गरेका छन्। मूलतः कृषिजन्य वस्तुको व्यापार गर्ने यो कम्पनीले ब्यांकबाट लिएको ऋणमा २०७७ साउनदेखि ब्याज अनुदान लिंदै आएको छ। २०७७ साउन–पुसमा मात्रै यो कम्पनीले सरकारबाट रू.३३ लाख ४२ हजार ५२७ ब्याज अनुदान लिइसकेको छ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसार, गत वैशाख मसान्तसम्ममा कृषि व्यवसायका लागि ऋण लिनेको संख्या ४३ हजार ९९७ छ, जसलाई ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले रू.१ खर्ब ९ करोड ६९ लाख ऋण दिएका छन्। यो सहुलियतपूर्ण ऋण ९८ प्रतिशतभन्दा बढी धितो जमानीमा दिइएको छ। कुल कृषि ऋणको जम्मा १.९ प्रतिशत मात्रै सामूहिक जमानी र परियोजना धितोमा दिइएबाट प्रष्ट हुन्छ, कृषि व्यवसायमा सरकारले दिने अनुदानको लाभ धितो राख्न सक्ने धनी समूहले मात्र हत्याइरहेका छन्।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ का अनुसार, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले रू.१० लाखसम्मको कृषि कर्जा परियोजना धितो राखेर र सामूहिक जमानीका आधारमा पनि दिन सक्छन्। तर, ‘ब्यांकले पत्याउने’ व्यावसायिक परियोजना बनाउने सामर्थ्य सामान्य किसानसँग नहुने राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेत बताउँछन्। उनका अनुसार, धितो राख्ने क्षमता भएकाका लागि मात्र यो सरकारी लाभको ढोका खुल्छ। बस्नेत भन्छन्, “सरकारसँग किसानको लगत नै छैन। त्यसैले, माटोमा घोट्टिने किसानले ब्याजमा अनुदानको लाभ पाएका छैनन्, कागजमा खेती गर्नेले यस्तो सुविधा हत्याइरहेका छन्।”
राष्ट्र ब्यांकको तथ्यांक अनुसार, २०७८ वैशाखसम्ममा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट धितो राखेर यस्तो ऋण लिने ३८ हजार १७६ जना छन् भने परियोजना धितो र सामूहिक जमानीमा ऋण लिने ५ हजार ८२१ जना मात्र। त्यस्तै, सम्पत्ति धितोमा कुल रू.१ खर्ब १५ अर्ब ४१ करोड कृषि कर्जा प्रवाह भएको छ भने परियोजना धितो र सामूहिक जमानीमा रू.२ अर्ब ७० करोड मात्रै। विना धितो ऋण पाउनेले प्रति ऋणी औसतमा रू.४ लाख ६४ हजार ८७१ ऋण पाएका छन् भने धितो राख्ने क्षमता भएकाले प्रति ऋणी औसतमा रू.३० लाख २३ हजार १६० ऋण पाएका छन्।
२०७६ असोजमा सर्लाही मलङ्गवाका सर्वसाधारण चर्को ब्याजले उठिबास लगाएको बिलौना सुनाउन काठमाडौं आएपछि स्थानीय साहुकार श्याम परदेशीले चक्रवृद्धि ब्याजको जालोमा पारेर झन्डै ३०० जनामाथि वर्षाैंदेखि शोषण गरिरहेको पोल खुलेको थियो।
ऋण चाहिने बहुसंख्यक किसानले अहिले पनि साहुकार, छिमेक, आफन्त र साथीभाइबाटै सापटी लिएर काम चलाउनुपर्ने उप–प्राध्यापक थापा बताउँछन्। पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/६७ मा पनि ऋण लिएका ६५ प्रतिशत घरपरिवारमध्ये करीब २० प्रतिशतले मात्र ब्यांकबाट ऋण पाएको उल्लेख छ। सर्वेक्षणका अनुसार, बाँकी ऋणीहरूले छिमेक, नातागोता, स्थानीय साहुकार, सहकारी आदिबाट ऋण लिन्छन्।
रू.१ करोडभन्दा माथिको ऋणमा ब्याज अनुदान पाएका दर्जनौं कम्पनी कृषि व्यापार र प्रशोधनसँग सम्बन्धित देखिन्छन्। यसले ऋणमा अनुदानको उपादेयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
कृषि मन्त्रालयका सचिव डा.योगेन्द्र कार्की कृषि ऋणमा अनुदान कार्यक्रमले उत्पादनमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउन नसकेको बताउँछन्। रू.१ करोडभन्दा माथि ऋण लिएका अधिकांश कम्पनी सीमित जिल्लाका मात्रै हुनुले पनि सरकारी अनुदान निश्चित क्षेत्रका व्यवसायीले मात्रै पाएको देखिन्छ। रू.१ करोडभन्दा माथिको कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान पाउनेमध्ये दुई तिहाइ जति त काठमाडौं र चितवन सहित सात जिल्लामा सीमित छन्। किसानको संख्या असाध्यै थोरै रहेको काठमाडौंमा २०१ जनाले रू.१ करोडभन्दा बढी कृषि ऋण लिएको तथ्यांकले देखाउँछ। चितवनमा २६० वटा कम्पनीेले यस्तो ऋण लिएका छन्। २२ जिल्लामा त रू.१ करोडभन्दा माथिको ऋण पाउने कम्पनी एउटै छैनन्।
सरकारबाट कम्तीमा रू.११ लाख ५० हजार ब्याज अनुदान लिइसकेका दुई कम्पनी पराजुली टी स्टेट र डाँफे टी प्रोसेसिङका सञ्चालक चण्डीप्रसाद पराजुली वर्षौंदेखि ब्यांकबाट लिंदै आएको ऋणलाई सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणमा सारेर लाभ लिएको स्वीकार गर्छन्। उनले खोपकेसँगको टेलिफोन कुराकानीमा भने, “हामी मात्र होइन, झापाका थुप्रै चिया उद्योगले यसैगरी ऋण लिएका छन्।”
राष्ट्र ब्यांकको नियमन विभागले २०७७ सालमा गरेको एक अध्ययनले पनि कृषि ऋण, महिला उद्यमशील कर्जा जस्ता सहुलियत कर्जा पाउन ‘कागज मिलाउने’ गरिएको फेला पारेको थियो। अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना भन्छन्, “सहुलियतमा महिला उद्यमशीलता ऋण पाइने भएपछि पुरुषले चलाएका उद्योग व्यवसायलाई महिलाका नाममा सारिएको भेटिएको छ।” उनी सहुलियतपूर्ण कर्जा लक्षित समूहले पाऊन् भन्नेमा मन्त्रालय सचेत रहेको दाबी गर्दै कृषि ऋणको प्रभावकारिताका विषयमा अध्ययन गरिने बताउँछन्। सरकारले महिला उद्यमशील कर्जाका रूपमा रू.१५ लाखसम्मको कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिंदै आएको छ।
पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका नेपाल राष्ट्र ब्यांकको अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठ कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहन दिने नीति नबनाई नहुने, तर बनाएको नीतिबाट पनि किसानले फाइदा नपाएको बताउँछन्। “वास्तविक किसानले लाभ लिऊन् भनेरै हामीले नीति बनाउने हो, तर यसको फाइदा टाठाबाठाले मात्रै उठाए। सक्षम र बलियो व्यावसायिक आधार भएका व्यवसायीहरूले सहुलियत ऋणमा लोभ नगरिदिए हुन्थ्यो,” उनी भन्छन्।
सरकारबाट कृषि ब्याज अनुदान लिनेमा लामो समयदेखि दुग्ध व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका देशका ठूला डेरी उद्योगहरू पनि छन्। त्यसैमध्येको एक काठमाडौं डेरीले पनि २०७६ मंसीरदेखि २०७७ पुससम्ममा मात्रै रू.२७ लाख ४३ हजार ६७४ ब्याज अनुदान दिएको छ। व्यवसायी प्रकाश महर्जनको परिवारको स्वामित्वमा यो उद्योग छ । उनै महर्जनको आइसक्रिम उत्पादन गर्ने शक्ति फुड्स प्रालिले पनि कृषि कर्जा बापत लिएको ऋणमा रू.३८ लाख ७७ हजार ४५५ ब्याज अनुदान पाएको छ। त्यसैगरी, चार दशकदेखि दुग्ध व्यवसायमा स्थापित नेपाल डेरीले पनि रू.३६ लाख ६० हजार ८३१ ब्याज अनुदान पाएको छ। राजकुमार दाहाल सञ्चालक रहेको अर्को ठूलो उद्योग राजधानी डेरीले पनि कम्तीमा रू.१३ लाख ब्याज अनुदान लिइसकेको छ।
चितवनका पोल्ट्री व्यवसायमा जमेका ठूला व्यवसायीहरू पनि अनुदान हत्याउनेको सूचीमा छन्। डा. तिलचन्द्र भट्टराईको पञ्चरत्न समूहका दाना उत्पादन, ह्याचरी, व्यापार लगायतका क्षेत्रमा करीब एक दर्जन व्यवसाय छन्। पोल्ट्री क्षेत्रमा ठूलो कारोबार गर्ने यो समूहका कम्तीमा चार कम्पनीले कृषि ऋण लिएर ब्याज अनुदान पाइरहेका छन्। यो समूह अन्तर्गतको पञ्चरत्न फिड प्रालिले २०७६ को चैतदेखि २०७७ पुससम्ममा रू.६ लाख १० हजार ५०१ ब्याज अनुदान पाएको छ। यही समूहको पश्चिमाञ्चल पोल्ट्री प्रालिले पनि रू.६ लाख १८ हजार ८२८ तथा पूर्वाञ्चल पोल्ट्री प्रालिले रू.८ लाख ५३ हजार ४२५ ब्याज अनुदान पाएका छन्। त्यसैगरी, यही समूहको पञ्चरत्न ह्याचरीले पनि रू.१ लाख ९८ हजार १२१ अनुदान पाएको छ।
चितवनको डल्लाकोटी समूहको रासायनिक मल र विषादीको आयात तथा उत्पादन आदिमा ठूलो कारोबार छ। यो समूह अन्तर्गतको डल्लाकोटी पोल्ट्री फार्मले सरकारबाट २०७६ वैशाखदेखि २०७७ पुससम्ममा कृषि ऋणको ब्याज तिर्न रू.४० लाख ९८ हजार २४४ अनुदान पाएको छ। चितवनकै दाउन्ने कर्पोरेट अन्तर्गतको दाउन्ने ब्रिडिङ फार्मले पनि कृषि ऋणको ब्याजमा सरकारबाट रू.४२ लाख ५४ हजार ४२१ अनुदान पाएको छ। यही समूहको दाउन्ने पोल्ट्री ब्रिडिङ फार्मले पनि रू.१९ लाख ३९ हजार १३४ ब्याज अनुदान पाएको छ।
२०५० को दशकदेखि नै कुखुरा सम्बन्धी व्यवसायमा स्थापित काठमाडौंको बालाजुस्थित आधुनिक पोल्ट्रीका दाना उद्योग, ब्रिडिङ फार्म, रेस्टुरेन्ट आदि सञ्चालनमा छन्। यो व्यावसायिक घरानाले पनि कृषि ऋण भनेर लिएको ब्यांक कर्जामा सरकारले २०७५ मंसीरदेखि २०७७ पुससम्ममा रू.४९ लाख ९१ हजार ११३ ब्याज अनुदान दिएको छ। आधुनिक डेरी प्रोडक्ट्सले पनि रू.२४ लाख ८ हजार ४८ ब्याज अनुदान पाएको छ। यसका तीन कम्पनी आधुनिक फिड, आधुनिक पोल्ट्री ब्रिडिङ र आधुनिक एग्रो प्रोडक्ट्सले पनि क्रमशः रू.२५ लाख ९० हजार, ३८ लाख २३ हजार तथा रू.३७ लाख १९ हजार ब्याज अनुदान लिएका छन्।
कुखुरा सम्बन्धी व्यवसायमा साना र मध्यमस्तरका किसानभन्दा ठूला व्यवसायीले नै लाभ सोहोरेको देखिन्छ। बालाजुस्थित क्वालिटी ह्याचरी देशका ठूला र स्थापित ह्याचरी उद्योगमध्ये एक हो। यसले कम्तीमा रू.२५ लाख ८९ हजार अनुदान लिइसकेको छ। बालाजुकै अर्का ठूला पोल्ट्री व्यवसायी नारायण फुँयालको फुँयाल पोल्ट्री फिड एन्ड ह्याचरी उद्योगले पनि रू.५२ लाख २७ हजार ब्याज अनुदान लिएको छ।
कुखुराको तयारी मासु र परिकार बिक्री गर्ने काठमाडौं आधुनिक चिकेन हाउसले पनि रू.४९ लाख ९१ हजार अनुदान पाएको छ। प्रशोधित मासुको व्यापार गर्ने गरमेट भियना मिट एन्ड मोर प्रोडक्ट्सले पनि रू.१० लाख ४१ हजार ९६ ब्याज अनुदान पाइसकेको छ। पोखरामा कुखुराको मासुको परिकार बिक्री गर्ने फेवा मिट प्रोडक्ट्स प्रालिले पनि रू.२७ लाख ९८ हजार २४७ ब्याज अनुदान पाएको छ।
पोखराको फेवा ग्रुप अफ पोल्ट्रीले २०७७ असोज–पुसमा रू.५ लाख २४ हजार ६६७ ब्याज अनुदान बापत सरकारबाट बुझेको छ। यो समूह नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका गण्डकी प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीप्रसाद पौडेलको हो। पोखराकै भट्टराई पोल्टी फार्मले पनि २०७६ वैशाखदेखि २०७७ पुससम्ममा रू.४४ लाख ७२ हजार ९३८ ब्याज अनुदान लिएको छ। यो कम्पनीका डा.अशेष भट्टराईले नेपाल सरकारको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) बाट समेत मासु प्रशोधन उद्योगका लागि रू.८३ लाख ८८ हजार अनुदान लिएका छन्।
केही नाफामूलक लघुवित्त संस्थालाई पनि राज्यकोषबाट झिकेर ब्याज अनुदान दिइएको छ। बनेपाको मिर्मिरे लघुवित्तलाई रू.१८ लाख ८३ हजार ५६२, कैलालीको एनआरएन लघुवित्तलाई रू.१२ लाख १९ हजार १७८, कञ्चनपुरको घोडाघोडी लघुवित्तलाई रू.७ लाख ५६ हजार १६४ र कैलालीको खप्तड लघुवित्तलाई रू.९ लाख १७ हजार ८०९ ब्याज अनुदान दिइएको भेटिएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका व्यवस्थापन विषयका उपप्राध्यापक भरतसिंह थापा कृषिसँग सम्बन्धित ऋणमा ब्याज अनुदानको लाभ वास्तविक किसानसम्म पुर्‍याउन कार्यक्रमको डिजाइन नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्। “विपन्न र निश्चित क्षेत्रका किसानलाई बढी अनुदान दिने गरी कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ, लाभ नचाहिने समूहलाई हटाउन सकिन्छ,” उनी भन्छन्। साभार: https://www.himalkhabar.com/news/125102
Previous articleजनतालाई केन्द्रमा राख
Next articleभारतस्थित नेपाली कूटनीतिज्ञको मोबाइल फोनमा पनि जासूसी भएको खुलासा